सिद्धार्थ बैंकको नाफा ३४ प्रतिशतले बढेर १८५ करोड, २१.८६ प्रतिशत लाभांश ?
विकासन्युज २०७५ श्रावण २१ गते १०:५३
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले आफ्नो नाफा ३४.०५ प्रतिशतले बढाएको छ । बैंकले गत आर्थिक बर्ष २०७४।७५ मा आफ्नो नाफा ४७ करोडले बढाएर एक अर्ब ८५ करोड नाफा आर्जन गर्न सफल भएको हो । जुन अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७३।७४ मा एक अर्ब ३८ करोड नाफा कमाउन सफल भएको थियो ।
नयाँ लेखा प्रणाली एनएफआरएस अनुसार सार्वजनिक गरिएको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार बैंकले १ खर्ब १ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको छ जुन अघिल्लो बर्षको भन्दा २४ अर्बले बढी हो । बैंकले आव २०७३।७४ मा ७७ अर्ब निक्षेप संकलन गर्न सफल भएको थियो ।
सिद्धार्थले ३ अर्ब ५४ करोड खुद ब्याज आम्दानी गर्दा खुद नाफा २ अर्ब ४५ करोड आर्जन गरेको हो । बैंकको वितरण योग्य नाफा भने १ अर्ब ८५ करोड मात्रै हुन आउँछ । बैंकको खराब कर्जा १.०५ प्रतिशत छ । सिद्धार्थको प्रति सेयर आम्दानी ३४.१६ रुपैंयाँ रहेको छ ।
बैंकले २१.८६ प्रतिशत लाभांश दिन सक्नेछ देखिन्छ ।
Sen. Float -1.1695